कला/साहित्य - Dhangadhi Khabar
शनिबार ३०, असोज २०७८ २१:२१
योग्यता लिलाम हुँदै छ पटक पटकमा
बिहिबार, ०६ कार्तिक २०७७ Dhangadhi Khabar
योग्यता लिलाम हुँदै छ पटक पटकमा। लाग्छ जवानी पोखियो ब्यर्थ सडकमा।
धर्मानन्द भट्ट का चार मुक्तक
झुकोस यो शीर लौ सामने प्यारले
शुक्रबार, ३० असोज २०७७ धर्मानन्द भट्ट
झुकोस यो शीर लौ सामने प्यारले। कहिल्यै नझुकोस माथ यो भारले।।
नआउ नजिक मेरो आँचल बिग्रीएला
बिहिबार, २९ असोज २०७७ धर्मानन्द भट्ट
नआउ नजिक मेरो आँचल बिग्रीएला। आँसु नझार्नु प्रिया गाँजल बिग्रीएला। कुरा बुझिन्छ दिलको हेरि मुहार तिम्रो, बोल्नु हुँदैन ज्यादै छलफल बिग्रीएला।
टाढाबाट हेर्नुस गतिविधि गद्दार जस्तो देखिन्छ
बुधबार, २८ असोज २०७७ Dhangadhi Khabar
टाढाबाट हेर्नुस गतिविधि गद्दार जस्तो देखिन्छ। समिपबाट नियाल्दा यो सरकार जस्तो देखिन्छ।
अहो! यत्र तत्र सर्बत्र मात्रै दलाल भेट्टिन्छन
अहो! यत्र तत्र सर्बत्र मात्रै दलाल भेट्टिन्छन। तिमीले गर्ने हरेक काममा सवाल भेट्टिन्छन।
‘मिस नेपाल एसईई २०२०’को उपाधि रेजिना लिम्बूले जितेकी छन् । लिम्बुले उपाधिको साथमा शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति, ट्रफी, क्राउन, गिफ्ट ह्याम्पर समेत हात पारेकी छन् । विजेताले लिम्बुले फिलिपिन्समा आयोजना हुने अन्तराष्ट्रिय
जे गरे आज पार्टीको निर्णय अनुकुल गरे मैले
मङ्गलबार, २० असोज २०७७ धर्मानन्द भट्ट
जे गरे आज पार्टीको निर्णय अनुकुल गरे मैले। कुर्सी तोडेकै हो स-गर्व आरोप कबुल गरे मैले।
जिन्दगी दिक्क लाग्छ मनमा उल्झन भएपछि
जिन्दगी दिक्क लाग्छ मनमा उल्झन भएपछि। कस्को के लाग्यो र जिन्दगी नै दुस्मन भएपछि।
सपनाहरू किन हो किन मसंग आउन मान्दैनन्
सपनाहरू किन हो किन मसंग आउन मान्दैनन्। त्यहीँ भएर त यी आँखा पनि निदाउन मान्दैनन्।
लाग्छ आजकल के-के हराए जस्तै
लाग्छ आजकल के-के हराए जस्तै। रात आफ्ना जस्तै दिन पराए जस्तै।
‘गंदी बात’ सीजन ५ः शुटिङको क्रममा लीक भयो ‘इन्टिमेट सीन’
एकता कपूरको प्रोडक्शन हाउस ‘अल्ट बालाजी’ को सबैभन्दा चर्चित वेभ सीरीज ‘गंदी बात’ को पाँचौँ सीजनको लागि दर्शकहरु पर्खाइमा छन् । यो सीजन आउनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ ।
भोकालाई जसरी यो अनाज प्यारो लाग्छ
शनिबार, १७ असोज २०७७ धर्मानन्द भट्ट
भोकालाई जसरी यो अनाज प्यारो लाग्छ। त्यसरी महाराजलाई युवराज प्यारो लाग्छ।
शनिबार, १० असोज २०७७ धनगढी खबर
कर्म बिना यो जीवन अर्थहीन बन्दै जानेछ
शुक्रबार, ०९ असोज २०७७ धर्मानन्द भट्ट
कर्म बिना यो जीवन अर्थहीन बन्दै जानेछ। सकेजती केर्नु र जीवन रङ्गिन बन्दै जानेछ।
पहिलो नजरमै यो दिलमा डेरा जमाएर बस्यौ
पहिलो नजरमै यो दिलमा डेरा जमाएर बस्यौ। अन्दाज नै भएन सुटुक्क कहिले आएर बस्यौ।
राजनीतिज्ञ एवम् साहित्यकार यज्ञप्रसाद आचार्यको निधन
पुराना राजनीतिज्ञ एवम् साहित्यकार तथा तत्कालीन राजपरिषद् स्थायी समिति सदस्य यज्ञप्रसाद आचार्यको निधन भएको छ । मुटु र मिर्गौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित रही नर्भिक अस्पतालको सघन कक्षमा उपचाररत
न कतै भोक देखेछ सरकारले न पीडा सुनेछ
मङ्गलबार, ०६ असोज २०७७ धर्मानन्द भट्ट
न कतै भोक देखेछ सरकारले न पीडा सुनेछ। न हिजोको भुमिका सम्झेछ न त गुन नै गुनेछ।
यहाँ पनि पुग्ने थिएन सायद कमजोर भएको भए
यहाँ पनि पुग्ने थिएन सायद कमजोर भएको भए। यति गर्वले शीर ठड्याउने थिएन चोर भएको भए।
तिम्रै लागि भनेर गएको छोरा फर्केर आएन
तिम्रै लागि भनेर गएको छोरा फर्केर आएन। त्यो दिन देखि उज्यालोमा अनुहार देखाएन।
आइतबार, ०४ असोज २०७७ एजेन्सी
एक रोबोटले डाक्टरको तीन समूहसँग मिलेर क्यान्सर बिरामीको शल्यक्रिया गरेको छ ।
ठानेर यो मौका मलाई नै आएर बसेको हो
आइतबार, ०४ असोज २०७७ धर्मानन्द भट्ट
ठानेर यो मौका मलाई नै आएर बसेको हो। ऊ पहिले देखि राहदानी बनएर बसेको हो।